သနေတျမှာမောငျးပွနျ၊ သိုငျးမှာပွောငျးပွနျ - Thaing Wizard
Posted on July 18, 2013 by athtet
သိုငျးပွောငျးပွနျကို စိတျဝငျစားသူမြားအတှကျ လာပါပွီ ဒီမှာ…
သိုငျးပညာမှာ အမြိုးအစား သုံးမြိုးခှဲလို့ရတယျ။ အကသိုငျး၊ အပွသိုငျးနဲ့ အခသြိုငျး လို့ ဖွဈတယျ။ ပွောငျးပွနျက အခသြိုငျးဖွဈတယျ။ ကွမျးတယျ၊ ရမျးတယျ၊ လုပျရငျ အပွတျလုပျတယျ။ အဲ… ကွညျ့လို့တော့ မလှဘူး။ အဲဒါပွောငျးပွနျပဲ… သနေတျမှာ မောငျးပွနျ၊ သိုငျးမှာ ပွောငျးပွနျ၊ ပွောငျးပွနျကို တောငျးပနျရငျ တောငျးပနျ၊ မတောငျးပနျရငျ နှာခေါငျးလနျမဟေ့… လို့ စာခြိုးယူရတဲ့ ပညာရပျဖွဈပါတယျ။
ပွောငျးပွနျပညာ၊ သို့မဟုတျ၊ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာကို မွနျမာပွညျ (ပွညျမ) တှငျ စတငျပို့ခသြှားသူမှာ ဆရာကွီး ဦးမောငျလေး၏ ဆရာ၊ ဆရာကွီး ဦးခယျြ၊ သို့မဟုတျ၊ ရှမျးအမြိုးသား သိုငျးဆရာကွီး ဆရာခယျြ ဖွဈပါသညျ။ ဆရာကွီး ဦးခယျြသညျ ရှမျးပွညျမှ ဆငျးလာသူ သိုငျးဆရာကွီး ဖွဈသျောလညျး မညျသညျ့မွို့ရှာတှငျ နထေိုငျခဲ့ကွောငျး၊ မညျသညျ့ စျောဘှားထံတှငျ အမှုထမျးခဲ့ကွောငျးကား ဆရာကွီး ဦးမောငျလေး ကိုယျတိုငျပငျ မသိခဲ့ရပေ။
ထို့ကွောငျ့ ဆရာကွီး ဦးခယျြတှငျ သငျဆရာရှိသညျ၊ မရှိသညျကိုလညျး မသိရ၊ ဆရာကွီး ဦးခယျြသညျ ဤ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာကို တီထှငျခဲ့သူလော၊ တီထှငျသော ဆရာ တဈစုံတဈယောကျထံမှ သငျယူခဲ့ခွငျးလော ဆိုသညျကို ယနအေထိ မသိရပါ။ ဆရာကွီး ဦးခယျြသညျ (၁) ဆရာကွီး ဦးမောငျလေး၊ (၂) ဆရာကွီး ဦးလုံ (၃) ဆရာကွီး သောမ (ချေါ) ဦးရှလှေတို့ သုံးယောကျကို ပညာသငျပေးသှားခဲ့သညျ။ ဆရာကွီး ဦးလုံနှငျ့၊ ဦးသောမတို့သညျ တပညျ့ မမှေးပါ။
ဆရာကွီး ဦးမောငျလေးသညျ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာကို ၁၆ နှဈသားတှငျ စတငျသငျယူခဲ့၍၊ ၁၉ နှဈသားတှငျ ဆရာဖွဈယူခဲ့ပါသညျ။ ၁၂၈၀ ခုနှဈမှစ၍ မွနျမာပွညျအနှံ့ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာကို ဖွနျ့ဖွူးခဲ့ပါသညျ။ တပျမတျောသားမြား၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ရနျကုနျပငျမတက်ကသိုလျ၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ (ကွညျမွငျတိုငျနယျမွေ)၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ (ဗိုလျတထောငျနယျမွေ)၊ ရနျကုနျစီးပှားရေးတက်ကသိုလျ၊ စကျမှုတက်ကသိုလျ၊ ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေး တက်ကသိုလျနှငျ့ ကြောငျးသားလူငယျ၊ အလုပျသမားမြားစှာတို့ကို သငျကွားပို့ခခြဲ့ပါသညျ။
လကျရှိမှာတော့ ဆရာကွီး ဦးမောငျလေး မရှိတော့ပါ။ သို့သျောလညျး ဆရာကွီး ဦးအောငျသိနျး (သနျလငျြ) မှ သိုငျးပွောငျးပွနျ ပငျမဦးစီးဆရာကွီးအနဖွေငျ့ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာမြား ဆကျလကျပွနျ့ပှားရေး အတှကျ လုပျဆောငျနပေါတယျ။
ကဲ… သိုငျးပွောငျးပွနျကို စိတျဝငျစားသှားကွပွီလား။ အဲ့ဒီအတှကျတော့ အောကျမှာ သိုငျးပွောငျးပွနျနဲ့ ပတျသတျတဲ့ စာအုပျအခြို့ကို တငျပေးထားပါတယျ။ Download ရယူနိုငျပါပွီဗြာ…
၁။ သိုငျးပွောငျးပွနျ ပွောငျးပွနျမောငျလေး
By အမြိုးသားစာပဆေုရ စာရေးဆရာ ပှငျ့လနျး (သတ်တုတှငျး)
သိုငျးပွောငျးပွနျ ပွောငျးပွနျမောငျလေး (ပှငျ့လနျး – သတ်တုတှငျး)
(File Size – 13.2 MB)
သိုငျးပွောငျးပွနျဆရာကွီး ဦးမောငျလေး၏ အတ်ထုပ်ပတ်တိစာအုပျ၊ အလှနျကောငျးသော စာအုပျဖွဈသညျ။ အတ်ထုပ်ပတ်တိစာအုပျဖွဈသျောလညျး ဝတ်တုအသှငျဖွငျ့ ရေးသားထားသဖွငျ့ မပငျြးမရိ တဈထိုငျတညျးဖွငျ့ ဖတျခငျြစဖှယျဖွဈသညျ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျဖွဈသညျ။
ဤစာအုပျကို khtnetpc.webs.com မှ ebook ပွုလုပျပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။
၂။ ကမ်ဗောဇနနျးတှငျးခူးခါခနျြ့ သိုငျးပွောငျးပွနျလကျသိုငျး [ပထမတှဲ]
By ဆရာကွီး ဦးအောငျသိနျး (သနျလငျြ)
ကမ်ဗောဇနနျးတှငျးခူးခါခနျြ့ သိုငျးပွောငျးပွနျလကျသိုငျး [ပထမတှဲ] (ဦးအောငျသိနျး – သနျလငျြ)
(File Size – 132 MB)
သိုငျးပွောငျးပွနျဆရာကွီး ဦးမောငျလေး၏ တပညျ့ရငျး၊ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ သိုငျးပွောငျးပွနျ ပငျမဦးစီးဆရာကွီးအဖွဈ ဆောငျရှကျနသေူ ဆရာကွီး ဦးအောငျသိနျး (သနျလငျြ) ကိုယျတိုငျ ဆရာကွီး ဦးမောငျလေး၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ ရေးသားခဲ့သော သိုငျးပွောငျးပွနျလကျသိုငျးကငျြ့နညျး စာအုပျဖွဈသညျ။ သိုငျးပွောငျးပွနျပညာကို ဝါသနာပါသူတို့အတှကျ မရှိမဖွဈဆောငျထားသငျ့သော စာအုပျကောငျးတဈအုပျဖွဈသညျ။
ဤစာအုပျသညျ Thaing Wizard မှ ပွုလုပျသော စာအုပျမဟုတျပါ။ ဝါသနာရှငျတဈယောကျမှ ပွုလုပျပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ ပွုလုပျသူမညျသူမှနျးကိုတော့ ကြှနျတျောပငျ သိခှငျ့မရခဲ့ပါ။ ယမနျနကေ့ Thaing Wizard ၏ email သို့ ဤစာအုပျကို ပေးပို့ပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။ ပေးပို့သူအမညျနှငျ့ အဘယျကွောငျ့ပေးပို့ခဲ့သညျကို ထညျ့သှငျးမဖျောပွခဲ့ပါ။ ထို့ကွောငျ့ အဆိုပါပေးပို့သော အမညျမသိပုဂ်ဂိုလျအား လှနျစှာကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ဒီနရောကနေ ပွောပါရစဗြော။ နောကျလဲ အခုလိုပဲ ပေးပို့နိုငျပါကွောငျး… နောငျအခါမြားတှငျ ပေးပို့သူ၏ အမညျလောကျကိုတော့ ထုတျဖျောအသိပေးစလေိုပါကွောငျး…
မကွာခငျမှာ သိုငျးပွောငျးပွနျနဲ့ ပတျသတျတာတှေ ထပျတငျပေးဖို့လညျး ရှိပါသေးကွောငျး၊ ဆကျလကျပွီး စောငျ့မြှျောအားပေးနကွေစလေို့ပါကွောငျးလညျး တဈခါတညျး အသိပေးလိုကျပါရစဗြော…
This entry was posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Martial Arts Video, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan and tagged စာအုပျ, ဆရာခယျြ, ပှငျ့လနျး(သတ်တုတှငျး), ပှဲကြောငျး, ဗနျတို, ဗနျရှညျ, မှတျတမျး, သိုငျးပွောငျးပွနျ, ဦးအောငျသိနျး (သနျလငျြ) by athtet. Bookmark the permalink.
40 thoughts on “သနေတျမှာမောငျးပွနျ၊ သိုငျးမှာပွောငျးပွနျ”
Nyi Nyi on July 18, 2013 at 4:52 pm said:
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ…ရှာရအရမ်းခက်တဲ့သိုင်းပြောင်းပြန် စာအုပ်တွေကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့ လုပ်လို့ရအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ…ကျနော်တို့ဆီမှာရှိပေမယ့် တခြား ပညာသင်လေးတွေအတွက် ဒီလိုစာအုပ်တွေရဖို့အရမ်းခက်ခဲပါတယ်….ရှားပါးစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ ပြောင်းဆန်တဲ့ပြောင်းပြန်ဘဂျမ်း၊ သေနတ်မှာမောင်းပြန် သိုင်းမှာပြောင်းပြန် စတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကိုလည်း တင်ပေးစေချင်တယ်ဗျာ….
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) on July 18, 2013 at 6:47 pm said:
အခုလို စာအုပ်တွေကို ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဒေါင်းယူသွားပါတယ်
Aung Thu Htet on July 19, 2013 at 10:15 am said:
ဆရာကြီး ဦးအောင်သိန်း (သန်လျင်) ရေးသားခဲ့တဲ့ ကမ္ဗောဇနန်းတွင်းခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်း [ပထမတွဲ] စာအုပ်ကို ကျွန်တော့်ဆီ ပေးပို့လာသူကတော့ ကိုအောင်ကို ဖြစ်တယ်လို့ မနက်က သိခဲ့ရပါတယ်။ ကိုအောင်ကိုရေ… ကျေးဇူးပါဗျာ။
opar on July 19, 2013 at 9:23 pm said:
မြန်မာ့ရိုးရာ သိုင်းပညာ သမိုင်း -စာအုပ်လိုချင် ပါတယ် ခင် ဗျာ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးနိုင် ရင် တင်ပေးစေလိုပါတယ်ခင် ဗျား။
ကျေးဇူးအထူးတင် ပါ ကြောင်း။
Aung Thu Htet on July 20, 2013 at 6:45 pm said:
ဟုတ် နည်းနည်းတော့ စောင့်ပါဗျာ။
soethatnaingso on July 19, 2013 at 10:25 pm said:
စည်သူ on July 20, 2013 at 6:38 am said:
Than Oo on July 20, 2013 at 6:38 am said:
မြန်မာ့သိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်များ ပေးပို့ပေးစေလိုပါသည်။ကျနော် မြန်မာ့သိုင်း ပညာရပ်အားလေးစားပါသည်။မြတ်နိုးပါသည်။ပေးပို့စေလိုပါသည်။ thanoompt@gmail.com ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Aung Thu Htet on July 20, 2013 at 6:44 pm said:
ဟုတ်… ဒီမှာ Download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျာ။ အဲ့ဒီ page မှာ တင်ပြီးသမျှစာအုပ်တွေကို စုထားပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်အသစ်တင်တိုင်း သိနေချင်ရင် Home Page ရဲ့ ညာဘက်ထိပ်နားမှာ Follow ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ email ဖြည့်ပြီး Follow button လေးကို နှိပ်ခဲ့ရင် အသစ်တင်တိုင်း အလိုအလျောက် email ကို လက်ခံရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Thayelay on July 20, 2013 at 10:52 pm said:
Thura Zaw on July 22, 2013 at 11:02 pm said:
heinhtut on July 25, 2013 at 11:21 am said:
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ရှားပါးတဲ့စာအုပ်တွေကိုရအောင်တင်ပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျနော်ကြားဖူးထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသေချာဘူးပေါ့တစ်ကယ်လုပ်ဟုတ်ခဲ့ရင်ကူညီပေးပါအုံး။ကျနော်တို့မြန်မာတွေရဲ့စစ်ဆင်၊စစ်တက်၊စစ်ထိုးပညာတွေကို ရေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ရှိရင်တင်ပေးပါအုံး
Wunna on July 30, 2013 at 2:16 pm said:
Can i have second book.Thanks for your sharing.
လှိုင် ဝင်းထွဋ် on August 5, 2013 at 4:40 pm said:
စနစ်တကျလေ့လာချင် ပါသည် တင် ထားပေးပါခင် ဗျာ
MYAT on August 7, 2013 at 7:39 am said:
Than on August 7, 2013 at 8:57 am said:
ဖြစ်နိုင်ရင် ပွင့်လန်းသတ္တုတွင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေ ထပ်တင်ပေးပါ – Thanks in advance!
Aung Thu Htet on August 15, 2013 at 11:42 am said:
ဟုတ် အဆင်ပြေတဲ့အခါများမှာ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်။
ဇောက်ထိုး on August 27, 2013 at 3:53 pm said:
ဖြစ်နိုင်ရင် သိုင်းပြောင်းပြန်ဒုတိယတွဲ လိုချင်ပါတယ်, အစဉ်လေးစားလျက်….
thetpaing on August 30, 2013 at 4:15 pm said:
နေလင်း on September 6, 2013 at 10:42 am said:
ကိုအောင်သူထက်ရေ သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာက ကမ္ဘာမှာနံပါတ် တစ် အကောင်းဆုံးပဲဗျ ဦးမောင်လေးသာရှိနေသေးရင် ကမ္ဘာကျော်သွားမှာ သေချာတယ်။ သိုင်းပြောင်းပြန်စာအုပ်လေးတွေ အမြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Khant Min on September 16, 2013 at 3:45 pm said:
Aung Thu Htet on September 17, 2013 at 11:47 am said:
ဟုတ်… စာအုပ်တွေက ရှိပါတယ်။ မအားသေးလို့ပါ။ နောက်လထဲမှာ အသစ်တွေတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
a on September 30, 2013 at 1:54 pm said:
chitlu on October 2, 2013 at 12:08 pm said:
သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေတင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား.. သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ဘူးခဲ့ ပေမဲ့ ..ဗြောင်းဆန်တဲ့ ပြောင်းပြန်ဘဂျမ်း… စာအုပ်တော့ မဖတ်ဘူးသေးဘူး.အဲဒီစာအုပ်အရင်ထဲကရှာလို့ မရခဲ့ဘူး..အဘိုးဦးမောင်လေးရဲ့ သား.. ဦးဘဂျမ်း..ရဲ့ အထ္ထုပတ္တိ လို့ သိရတယ်.ပွင့်လန်း..ဘဲရေးခဲ့တာလို့ သိရတယ်.စာအုပ်ရခဲ့ ရင်တင်ပေးပါ..ကျေးဇူးပါ…
nay linn aung on November 25, 2013 at 4:22 am said:
သိုင်းဆရာကြီး ဦးသွင် ရေးခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဓားရေး သုံးဆယ့်ခုနှစ်ခန်း စာအုပ် ကျွှန်တော် ဆီမှာရှိပါတယ် တင်ပေးဖို့အခက်အခဲ ရှိနေလို့ ဖတ်ချင်တဲ့ အစ်ကိုများ တင်ပေးချင်တဲ့အစ်ကိုများ ကျွန်တော်ဆီမှာလာယူလို့ရပါတယ် ကျွန်တော် မတင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး ph 420060869 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
sweswewin on December 1, 2013 at 8:06 pm said:
သိုင်းပညာကိုလေးစားပါတယ် သိုင်းစာအုပ်တွေတင်ပေးတဲ့ပေးကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
pyaesoneaung on December 11, 2013 at 8:15 pm said:
ဒီsite ကို ဒီနေ့မှမမျှော်လင့်ပဲတွေ့တာပါ
Aung Thu Htet on December 11, 2013 at 9:55 pm said:
ဟုတ်… စာအုပ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာတောင် တစ်လလောက်ရှိသွားပြီဗျာ။ မအားတာနဲ့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ အသစ်တွေဆက်ပြီး တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ခုလိုအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
pyaesoneaung on December 11, 2013 at 8:18 pm said:
ရသမျှစာအုပ်တွေ တစ်ခါတည်း Download ဆွဲသွားပါတယ်
nyein nyein on December 16, 2013 at 8:05 pm said:
သိုင်းပညာစာအုပ်လေးတွေကို အခုလိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တာကြာပါပြီ နောင်နှစ်တွေမှာပြန်ဆုံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် တောသားလေး မောင်ငြိမ်း
nyein nyein on December 19, 2013 at 7:30 pm said:
ကမ္ဗောဇနန်းတွင်းခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်း [ပထမတွဲ] (ဦးအောင်သိန်း – သန်လျင်) Download လုပ်မရလို့ bahmoforest.mm@gmail.com ထဲကို ပို့ပေးလိုရရင် ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တောသားလေး မောင်ငြိမ်း
Aung Thu Htet on December 20, 2013 at 9:45 am said:
ဟုတ် စာအုပ်က ဖိုင်ဆိုဒ်နည်းနည်းကြီးနေတော့ email နဲ့ ပို့ဖို့ မလွယ်ဘူးဗျ။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ copy စာအုပ် ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ မြို့ထဲ ပန်းဆိုးတန်းတစ်ဝိုက်က စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ မေးဝယ်ပါ။ ၃၀၀၀-ကျပ်လောက်ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။
Min Min on January 3, 2014 at 9:22 pm said:
Aung Thu Htet on January 3, 2014 at 11:27 pm said:
ဟုတ်… ဒုတိယတွဲက မထွက်ဖြစ်ဘူးဗျ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပါ။
တောသားလေး မောင်ငြိမ်း on January 4, 2014 at 6:43 pm said:
အခုလို ပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်နှစ်တွေမှာ ရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ
Pingback: မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း စာအုပ် | Thaing Wizard
khon p chit on December 24, 2014 at 9:10 pm said:
ဒုတိယစာအုပ်လေးပါ တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်
khon p chit on December 24, 2014 at 9:26 pm said:
thu thu on March 11, 2015 at 11:41 am said:
ပြေလေး on August 7, 2016 at 9:50 pm said:
LeaveaReply to thetpaing Cancel reply